Indlu esemaphandleni ekuthiwa yiJacuzzi phakathi kweChambord neBeauval - I-Airbnb
Indlu esemaphandleni ekuthiwa yiJacuzzi phakathi kweChambord neBeauval
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguArlene
Indlu esemaphandleni i- "Premier Pas" ephakathi kwenqaba yaseChambord nepaki ye-zoo yaseBeauval.
Kulungele ukuhlaziya iibhetri zakho njengentsapho okanye ukuchitha ixesha lokuthandana kwabantu ababini, le ndawo yokuhlala intsha ehonjiswe ngendlela yale mihla netofotofo, ikunika ixesha lokuphumla kwi-jacuzzy yangaphakathi enabantu abayi-3 unyaka wonke.
Ikwindawo ephakathi kwidolophana yaseCour-cheverny, kwimizuzu eyi-2 ukusuka kwiDomaine de Cheverny kunye neMyuziyam yayo yeTintin, imizuzu eyi-15 ukusuka eChâteau de Blois, imizuzu eyi-25 ukusuka eChambord nemizuzu eyi-35 ukusuka kwiZoo de Beauval
I-Jacuzzi yabucala, inethi yokuphumla, ikhaya elitsha, into yokuhombisa ehlaziyiweyo neyale mihla.
Indawo yokuhlala kwilali, ethe cwaka, enazo zonke izinto ezinokusetyenziswa ezikwiimitha eziyi-100.
Indawo yokuhlala yakhiwe kwigumbi eliphambili eliyi-35 m2 elinekhitshi elivulekileyo nefenitshala epheleleyo. Uza kufumana ioveni, isitovu, ifriji, i-deep freezer, umatshini wokuhlamba izitya, into yokwenza ukutya, umatshini wokwenza ikofu we-sespresso kunye nezindlu zangasese. Isofa inokuhlala umntu omdala okanye abantwana ababini ngobubanzi obuziisentimitha eziyi-130 (ukuze kube tofotofo omnye kumatrasi ofakiweyo). Indawo yokugcina iimpahla iyafumaneka ukupaka iibhayisekile ngokomzekelo, kukho nomatshini wokuhlamba impahla nowolula.
Ngaphezu koko, unokonwabela i-jacuzzi yangaphakathi yabantu aba-3 nanini na.
Ngaphantsi, uza kufumana igumbi lokulala elikhulu elinebhedi eyi-160 enesikrini esicaba, igumbi lokunxiba, indawo encinci yeofisi, igumbi lokuhlambela elineshawara negumbi langasese nendawo yokuphumla.
Le ndawo inokwamkela usana. Ibhedi yeambrela enomatrasi, isitulo esiphakamileyo kunye nezitya zabantwana zilahlwayo kuwe kuba ilineni yebhedi yeambrela ayifumaneki.
Yonke indlu esemaphandleni inomatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu !
4.96 · Izimvo eziyi-178
Indawo yokuhlala isembindini welali. Uza kufumana ngaphakathi kweemitha eziyi-100, ivenkile yezinto ezibhakiweyo, ukutya, inyama, icinezela, icuba, ukuqesha ibhayisekile..
Umbuki zindwendwe ngu- Arlene
Sifumaneka ngomyalezo okanye nge-imeyile yonke imihla ukuze siphendule nayiphi na imibuzo onokuba nayo nokuhlangabezana kakuhle neemfuno zakho. Umnqweno othile, umnqweno wesidlo sasemini, umnqweno weentyatyambo xa ufika kwindawo yokuhlala, ibhotile epholileyo... ungonqeni ukwenza izicelo zakho. Siza kuzama ukuziphendula ngokonwaba.
Siza kukuthumela ikhowudi yedijithali ngosuku lokufika kwakho kunye nemiyalelo yokufikelela. Uza kukhululeka ukuba ufike ngexesha onqwenela ngalo emva ko-5 wasebusuku. Incwadi yokwamkela iindwendwe iza kukulinda ngaphakathi kule yunithi.
Sifumaneka ngomyalezo okanye nge-imeyile yonke imihla ukuze siphendule nayiphi na imibuzo onokuba nayo nokuhlangabezana kakuhle neemfuno zakho. Umnqweno othile, umnqweno wesidlo sa…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Cour-Cheverny